Headphones – Tagged "Headsets" – ICT.com.mm
Lenovo Essential Stereo Analog Headset (4XD0K25030)K33,000
Hoco W100 Touring Gaming Headset (Black)-29K26,440
Hoco W101 Streamer Gaming Headphones (Black)-29K29,084
Hoco W102 Cool Tour Gaming Headphones (Blue)-29K30,405
Hoco W102 Cool Tour Gaming Headphones (Red)-29K30,405
Hoco W100 Touring Gaming Headset (Black)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ W100 Touring gaming wired headphones with omnidirectional microphone separate plugs 3.5mm for headphones / 3.5mm for mic / USB plug for LED lights cable 2.4m with 5...
Hoco W101 Streamer Gaming Headphones (Black)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ W101 Streamer wired headphones with omnidirectional microphone, separate plugs 3.5mm for audio / 3.5mm for mic / USB plug for power, cable 2.4m with7colors breathing...
Hoco W102 Cool Tour Gaming Headphones (Blue)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ W102 Cool tour wired headphones with omnidirectional microphone, separate plugs 3.5mm and USB, cable 2m, with LED light Speaker: 40mm. Interface: USB-A + 3.5mm plug. Microphone: omnidirectional...
Hoco W102 Cool Tour Gaming Headphones (Red)-29
Hoco W103 Magic Tour Gaming Headphones (Red)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ W103 Magic tour wired headphones with omnidirectional microphone, separate plugs 3.5mm / USB, cable 1.2m Speaker: 40mm. Interface: USB + 3.5 plug. Microphone: omnidirectional microphone, Φ6.0*2.2mm. Sizes:...
Hoco W103 Magic Tour Gaming Headphones (Black)-29
REMAX Wireless Headset RB-T31 (Silver)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 01030051 Model: Totin Wireledd Headset RB-T31 Effective distance: 10M Bluetooth Version: 5.0 Resistance: 16Ω Color: Silver Wireless Bluetooth 5.0 chip for stable connection Fashionable compact outline,...
REMAX Wireless Headset RB-T31 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 01030051 Model: Totin Wireledd Headset RB-T31 Effective distance: 10M Bluetooth Version: 5.0 Resistance: 16Ω Color: Black Wireless Bluetooth 5.0 chip for stable connection Fashionable compact outline,...
REMAX Wireless Headset RB-T32 (Silver)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 01030054 Model: Wireless Headset RB-T32 Effective distance: 10M Bluetooth Version: V5.0+EDR Resistance: 16Ω Voltage: 3.7V CTN G.W: 15.55 KG CTN size: 60*35*50 CM Color: Silver Business...
REMAX Wireless Headset RB-T32 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 01030054 Model: Wireless Headset RB-T32 Effective distance: 10M Bluetooth Version: V5.0+EDR Resistance: 16Ω Voltage: 3.7V CTN G.W: 15.55 KG CTN size: 60*35*50 CM Color: Black Business...
msi Immerse GH30 Gaming Headset (Black)-1
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Large 40mm drivers Extra 3.5mm splitter cable to use microphone and speaker on PC Lightweight and foldable headband design Detachable microphone Easy volume and microphone control Carry...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။သေးငယ်ကျစ်လျစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည့် Jabra အမှတ်တံဆိပ် Bluetooth Headset (ရွှေရောင်) ဖြစ်သည်။ ဘတ္ထရီသက်တမ်းကြာမြင့်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကြာမြင့်ချိန် (၉)နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Power Nap feature ကိုအသုံးပြု၍ Stand by အနေအထားဖြင့် တစ်နှစ်တိတိထားရှိနိုင်သည်။ On/Off ခလုတ်နှင့်အတူ အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များပါဝင်သဖြင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့် Headset အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Jabra Boost,...
Dell Pro Stereo Headset (UC350)-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product Type: Headset – wired – USB, 3.5 mm jack Earpad Material: Leatherette Sound Output Mode: Stereo Audio Specifications: Frequency Response 150 – 7000 Hz – Sensitivity...
REMAX Bluetooth Earphone RB-T8 (Gold)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Bluetooth: V4.1 Multi-point function Battery indication Profile Support: HSP/HFP/A2DP/AVRCP Operating distance: up to 10m (free space) Talk/Music time: up to 4.5hrs Standby time: 55 hrs Charger time:...
REMAX Bluetooth Earphone RB-T8 (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 01030013 Brand: Remax Model: Bluetooth Earphone RB-T8 Bluetooth: V4.1 Multi-point function Battery indication Profile Support: HSP/HFP/A2DP/AVRCP Operating distance: up to 10m (free space) Talk/Music time: up...
REMAX Bluetooth Earphone RB-T8 (Black)
REMAX Bluetooth Earphone RB-T9 (Pink)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 01030015 Brand: Remax Model: Bluetooth Earphone T9 Capacity: 100 mA Battery Talk time: about6hours Time: about music5hours Time: up to 180 hours...
REMAX Bluetooth Earphone RB-T9 (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Capacity: 100 mA Battery Talk time:about6hours Time:about music5hours Time:up to 180 hours Stand-by Bluetooth Distance: 10m Charging Voltage: 5V Working Voltage: 3.7V Material:...
REMAX Bluetooth Earphone RB-T9 (Black)
Sony WI-C400 Wireless In-ear Headphones (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Easy BLUETOOTH® connectivity with One-touch NFC Up to 20 hours’ battery life 0.35 in neodymium drivers for dynamic sound Comfortable behind-the-neck style with cable management Vibration for...